Igumbi elipholileyo eliphambi kweManahan nguZest Parang Raja
I-Zest Parang Raja yindawo yokuhlala yangoku, etofotofo kodwa efikelelekayo elawulwa yinkampani yolawulo lweehotele zehlabathi, iSwiss-Belhotel International. Ibekwe ngokucwangcisiweyo kumbindi weSolo, ihotele ivumela ufikelelo olulula kwizithili zoshishino, kunye nezinto ezinomtsalane kubakhenkethi ziyenza ilungele uhlahlo lwabiwo-mali kunye nabakhenkethi bezolonwabo ukuya eSolo. Kumgama omalunga neekhilomitha ezili-10 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe sase-Adi Soemarmo, yimizuzu nje embalwa yokuhamba ukusuka eManahan Stadium kwaye ngaphantsi kwemizuzu eli-10 ngemoto ukusuka kwiindawo ezahlukeneyo zokhenketho ezifana neBalekambang City Park, iKampung Batik Laweyan, iMangkunegaran Palace kunye neSurakarta Hadiningrat Palace.
Ihotele inamagumbi angama-80 anesitayile seZest kuquka negumbi labakhubazekileyo. Onke amagumbi acwengileyo kodwa ayilwe ngobuchule ngangaphakathi anemibala eqaqambileyo kunye nefenitshala. Amagumbi ayi-16sqm agxile kwizinto ezibalulekileyo eziquka iibhedi ezisemgangathweni, iishawari ezinamandla kunye nesantya esiphezulu sofikelelo kwi-intanethi ye-Wifi.
Yonwabela izitya zasekhaya nezamazwe ngamazwe ngesidlo sakusasa se-buffet kunye nemenyu ye-a-la-carte imini yonke eCitruz™ Kitchen and Bar. Ukhuseleko lweendwendwe, zonke iitafile zicwangciswe ngononophelo kunye nomgama ofunekayo phakathi kwazo ukuze zisebenzise uluhlu lwemigangatho "eMtsha yesiqhelo" yeMpilo, uKhuseleko kunye neenkqubo zoCoceko. Oku kukuqinisekisa ukuba iindwendwe zethu ziyakonwabela ukutya kwiivenkile zethu ngokulula. Ikwaxhaswa nofikelelo lwe-intanethi ye-Wifi yaMahla.
Ukulungiselela uhlahlo lwabiwo-mali lweentlanganiso zoshishino kunye nemisebenzi yentlalontle, i-Zest Parang Raja ibonelela ngamagumbi eentlanganiso ayi-2 anokuhlalisa ukuya kwiindwendwe eziyi-144. Ilungele iintlanganiso ezincinci ukuya eziphakathi, iinkcazo zemveliso, iindibano, udliwano-ndlebe, amaqela abucala. Igumbi ngalinye leentlanganiso ligqitywe lineendawo zokuhlanganisana zale mihla.